Ciidamada Amniga ee Bosaso ayaa toogtay rag fulinayay dilal qorshoosan | raascasayrmedia.com
← Puntland: Ciidanka badda Qatar kuma ahan Somaliland.
Dowladda Jabuuti oo safaarad ka furatay Muqdisho →
December 9, 2010 · 5:11 am
Ciidamada Amniga ee Bosaso ayaa toogtay rag fulinayay dilal qorshoosan
Ciidamada amaanka ee magaalada Bosaaso ayaa duhurnimadii maanta toogasho ku dilay hal qof mid kalena dhaawacay kuwaas oo la sheegay in ay dhaawaceen mid kamid ah howlwadeenada Wasaarada Maaliyada ee xafiiskeeda magaalada Bosaaso, kaas oo markii danbe u dhintey dhaawicii soo gaarey.
Ciidanka ayaa dilakan & Dhaawacan geystay kadib markii ay Rasaas daqiiqado socotay ay dhexmartay labada dhinac kuwaas oo ay Boolisku sheegeen in Kooxdii Sarkaalkan dishay ay ahaayeen islamarkaasna ay isku dayeen inay baxsadaan balse ay suurtoobi weyday.
Gudoomiyaha gobolka Bari ee Dawlada Puntland Cabdi Xaafid Cali Yuusuf ayaa Warbaahinta u sheegey in kooxdan dilka geystay ay si deg deg ah ciidanka Amaanku usoo gaareen dabadeedna ay rasaasi dhexmartay labada dhinac,waxaana uu sheegey in Ciidamadu ay howlgalkaas ku dileen midkamid ah labadii nin halka ay midkalena ku dhaaweceen.
Xilliga uu falkaan dhacaayay waxaa qaybo kamid ah magaalada kasoconaayay howlgalo balaaran oo ay Ciidanku ku qab qabanayeen dadka ay uga shakiyaan falalka amaan darrada ah oo bilaabmay maalinimadii shalay.
Gudoomiyuhu wuxuu falkan oo ahaa midkii ugu horeeyey ee ay Ciidamada Amaanku qaadaan ku tilmaamay talaabo horey looqaaday,waxaana uu amaanay qaarkamid ah Shacabka Boosaaso oo uu sheegey inay Ciidanka ka caawiyeen Howlgalkan isagoo codsaday in lasii labajibaaro wadashaqeynta Booliska & Shacabka.